Waa inaad wali ku dhaqdaa dharka, sidaa darteed maxaad ugu sameyn weyday 21 ¢ rar ah oo ay kujirto Amazon's Tide Pods? - BGR - TELES RELAY
Waa inaad wali ku dhaqdaa dharka, sidaa darteed maxaad ugu sameyn weyday 21 ¢ rar ah oo ay kujirto Amazon's Tide Pods? - BGR
By TELES RELAY	 On Jan 8, 2020
Tani khalad ma tahay? Amazon waxay iibisaa dab aad u weyn 50 4 XNUMXK TV…
Amazon qarxisay barkimooyin iyo joodariyada xumbo xumada…
Wi-Fi fidiyaha $ 16, xatoojiyaha wireless-ka ee $ 8, AirPods Pro,…
Waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad soo iibsato had iyo jeer, haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba, oo dharka lagu dhaqdo ayaa ku filan liiskan. Haddii ay wali tahay inaad mar walba dharka dhaqdo, maxaad u iibsan weydaa saabuun hadda marka qiima dhimista lagu iibinayo? Tag Amazon oo waxaad ka heli doontaa 81 weelal Tide PODS Pacs Qalabka Dhaqidda Dharka iibka oo leh qiime dhimis 17% ah. Tani waxay yareynaysaa boodhadhkan 'HE Turbo Tide' illaa $ 0,21 midkiiba, ama $ 16,97 wadarta!
Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato bogga wax soo saarka:
Dhamaan noocyada dharka
Furi udgoonka cusub ee nadaafadda
10 jeer awooda nadiifinta * (* Tirtirida wasakhda 1 qaadasho 10 jeer qiyaasta calaamadaha ugu horeeya ee heshiisyada dareeraha wanaagsan)
3 in 1 teknolojiyada: saabuun dhaqmo, waxyaabaha meesha ka saaraya, difaaca ilaanta midabka
Kala diri karaa heerkulka oo dhan
raac @BGRDeals on Twitter si loo raaco dalabyada ugu dambeeyay uguna weyn ee aan ka helno shabakadda. Qiimayaashu way is beddeli karaan iyadoon ogeysiis la sameynin isla markaana rasiidhada kor ku xusan laga heli karo tiro xadidan. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
ka dibnaIyadooBGRwaa lacagd39Amazonwaa incadaaladl39offre
TELES RELAY 13306 posts 0 comments
19 ka mid ah taxanaha telefishanka ee ugu daawashada badan bishii Diseembar ee dhammaan adeegyada adeegga aad jeceshahay - BGR
"Qoob-ka-ciyaarka maskarada"? Haa, Fox wuxuu sameeyaa waxyar-ka-roodhiisii ​​foosha xumaa - dadka
Tani khalad ma tahay? Amazon waxay ku iibisaa TV 50 dabeed heer sare ah $ 4 tan…
Amazon waxay ku dhufatay barkimooyin iyo joodariyada xumbo xumbo hal…
Wi-Fi fidiyaha $ 16, fiijiyaha fiilo-la'aanta ee $ 8, AirPods Pro, barkimo xumbo…
Mid ka mid ah telefishanka-shaashadda ugu wanaagsan ee Samsung oo dhan $ 299 ayaa laga furay…
20-dii subaxnimo ee Janaayo 22, 2020 - HALKAN
Ku wareejinta khadka tareenka Yaounde- Ngaoundere Wadada dib ayaa loo dhisay
India: "Dhibaatooyinka oo dhan waa la xaliyay": DMK iyo Kongareeska ayaa wacay…
Palace wax badan kama qaban isku aadka Man…
Milkiile kasta oo Apple Watch ah waa inuu lahaadaa xirmadan…
RTL Petit Matin laga bilaabo 20 January 2020 - VIDEO
21 ee Diseembar 30 2019 Wargeys - VIDEO
TALO: 24 TALOOYIN KU SAABSAN SHAQAALAHA IYO MACLUUMAADKA LACAG LA'AANTAA || FIKRADAHA ...
Halkaan ka daawo sida tooska ah ee loo yaqaan "SpaceX" oo tijaabinaya tijaabada…